Thailand Koh Samui Ayaa Dib Ugu Furay Safarayaasha Caalamiga Ah Ee Talaalan | Wararka safarka ee Thailand
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka safarka ee Thailand » Koh Samui ee Thailand wuxuu dib ugulaabanayaa Safarayaasha Caalamiga ee Talaalan
Koh Samui ee Thailand wuxuu dib ugulaabanayaa Safarayaasha Caalamiga ee Talaalan
SKÅL waxay soo dhaweyneysaa dib u furida jasiirada labaad ee ugu weyn Thailand si loogu talaalo dadka safarka ah ee ajaanibta ah barnaamijka SAMUI + PLUS.
Safrayaashu waa inay ka safraan waddan la oggolaaday, waana inay ku sugnaayeen dalkaas ugu yaraan 21 maalmood oo xiriir ah.
Dadka waaweyn ee imanaya waa inay si buuxda u tallaalaan tallaal la oggolaaday oo ah COVID-19 ugu yaraan 14 maalmood kahor taariikhda safarka.
Imaatinku wuxuu marayaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Bangkok Suvarnabhumi waxaana loo wareejinayaa garoonka tooska ah ee Bangkok Airways duulimaad toos ah ilaa Koh Samui iyadoo loo marayo wadada transit-ka xiran.
Koh Samui - ThailandJasiiradda labaad ee ugu weyn iyo jasiiradaha deriska la ah ee Koh Phangan iyo Koh Tao - ayaa loo furay in lagu tallaalo socotada caalamiga ah iyada oo aan la karantiilayn nidaamka cusub ee dalxiiska ee SAMUI + oo loogu talagalay in lagu bilaabo bilawga warshadaha dalxiiska ee jasiiradaha oo ay halakeeyeen aafada Covid-19
Qaabka Samui + wuxuu u taagan yahay bilo qorsheyn iyo iskaashi dhow oo u dhexeeya hay'adaha dalxiiska ee ugu muhiimsan Thailand, TAT [Ururka Dalxiiska ee Thailand], THA [Ururka Hoteellada Thailand], TAKS [Dalxiiska Dalxiiska Koh Samui], dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, kuwaas oo wakiilladoodu wuxuu kaqeyb galay xafladii daahfurka xalay ee Banana FanSea Resort oo ku taal Samui ee caanka ah Chaweng Beach.
Qaabka SAMUI + Plus - Muuqaal ahaan, sida ay ugu shaqeyso booqdayaasha caalamiga ah ee la tallaalay:
Shahaadada Gelitaanka (COE).
Tijaabinta xun ee RT-PCR COVID-19 oo aan ka badnayn 72 saacadood ka hor taariikhda safarka.
Socotada da'doodu ka hooseyso 18 sano uma baahna caddeyn tallaal, laakiin waa inay la safraan waalidiin si buuxda loo tallaalay ama ilaaliyayaal oo ay muujiyaan baaritaanka aan fiicnayn ee RT-PCR COVID-19.
Caymiska caymiska ee daboolaya kharashyada COVID-19 ugu yaraan $ 100,000.
Waa inuu keli ku ahaadaa hudheel ALQ la oggolaaday 7-da habeen ee ugu horreeya joogitaankooda.
Waxaa laga yaabaa inuu joogo hoteelka SHA + Plus ee la ansixiyay ama villa gaarka loo leeyahay ee Koh Samui, Koh Phangan ama Koh Tao 7da habeen ee soo socota ee joogitaanka Koh Samui.
Dhammaan duullimaadyada diyaaradaha iyo hudheellada waa inay ahaadaan kuwo horay loo sii ballansaday oo horay loo sii siiyay oo ay ku jiraan lacag bixinta 3 x RT-PCR COVID-19 oo khasab ah.
Waa inuu soo dejiyaa oo rakibaa codsiyada digniinta ah.